कत्ति पटक लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण गर्नु पर्छ? - उद्योग समाचार - शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण कति पटक गर्नु पर्छ?
समय: 2019-12-17 हिट्स: 3
अनावश्यक अनुहार र शरीरको कपाल हटाउनको लागि सीधा उत्तेजित हुन सक्छ। शेभिंग, ट्वीज र वेक्सिंग समय खपत गर्ने तालिका हो जुन प्राय: दैनिक प्रदर्शन गरिनु पर्दछ कपालको विकाससँगै राख्न। ती मानिसहरु जो अपराधीबाट थाकेका छन्, लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण तपाईको कपाल दु: खको समाधान हुन सक्छ।
तपाइँ कति पटक लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण चाहिन्छ?
कपाल चक्रमा बढ्छ, यसको मतलब तपाइँ तपाइँको अनुहार वा शरीरको कपाल सबै एकैचोटि कहिले देख्नुहुन्न। त्यसोभए स्थायी रूपमा यस कपाललाई हटाउनका लागि, follicles सक्रिय बढ्दो चक्रमा हुनु आवश्यक छ।
प्रक्रियाको क्रममा, एक लेजरले प्रत्येक फोलिकलमा मेलेनिनलाई लक्षित गर्दछ। मेलानिन र pig्गीन हो जसले कपालको रंग दिन्छ र कपाल बढ्दै नभएसम्म उपस्थित हुँदैन। यसैकारण धेरै लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण सत्रहरू तपाइँको विशेष क्षेत्रमा तपाइँको सबै कपाल हटाउन आवश्यक छ। यो पनि किन लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण सेतो, हल्का रातो, गोरा वा खैरो कपाल भएका व्यक्तिहरूमा सँधै काम गर्दैन।
सामान्यतया भन्ने हो भने, प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक चक्रको सबै कपाल हटाइएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न people देखि treatment सम्म उपचार सत्रहरूको आवश्यकता पर्दछ। लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण सत्रहरू कपाललाई नयाँ चक्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन सामान्यतया कम्तिमा आठ हप्ताको दूरीसहित टाढा राखिन्छ ताकि सबै फोलिकल्स लक्षित हुन्छन्।
यद्यपि कपालको विकासको गति व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फरक हुन्छ र कपालको स्थानको आधारमा फरक पर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, अनुहारको कपाल लेग कपाल भन्दा छिटो बढ्न झल्किन्छ र हरेक चार हप्तामा उपचार गर्नु पर्ने हुन सक्छ। खुट्टाको कपाल धेरै बिस्तारै हुर्कन सक्छ र १२ हप्ता अन्तरालमा गर्न सकिन्छ।
लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण पछि।
तपाईंको पहिलो लेजर उपचार सत्र पछि, कपाल बहाउने अवधि छ। एक उपचार पछि करीव तीन हप्ता को लागी, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि केहि बढ्दो कपाल जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा यो उपचारित कपाल झर्ने, वा बग्ने हो।
तपाईं लुफाह, हल्का चिनी स्क्रब, वा वाथ क्लोथ प्रयोग गरेर तपाईं नुहाउन वा नुहाउँदा क्षेत्र विस्तार गर्न र कपाललाई छिटो हटाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं अझै उपचार कोठामा करीव तीन देखि चार हप्ता पछि कपाल हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको अन्तिम लेजर उपचारको क्रममा बढ्दो चरणमा थिएन। यो दुर्लभ घटना हो तर यो हुन्छ, त्यसैले तपाईंको अर्को सत्रमा तपाईंको लेजर उपचार विशेषज्ञलाई थाहा दिनुहोस्।
तपाईंको कपाल बगइसकेपछि, तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि क्षेत्र सहज र केश-रहित हुनेछ केही हप्ताहरूको लागि। एकचोटि कपाल फेरि ठूलो हुन थाल्छ, यो तपाईंको अर्को उपचारको लागि समय हो।
अघिल्लो: Common सामान्य लेजर कपाल हटाउने मिथ्या
अर्को: लेजर कपाल हटाउन को सावधानी